The Types of Interface Wireless Cards | OS-ụlọ ahịa Blog
July 19, 2019 ecommerce 3G & ikuku kaadị, Electronics, OS-ụlọ ahịa, ngwaahịa, Technology 0
The wireless kaadị bụ a wireless ọnụ ngwaọrụ eji maka achọ ihe Internet site a njikọ ikuku na netwọk n'okpuru wireless mkpuchi nke a wireless obodo ebe netwọk. nke ahụ bụ, a wireless kaadị is a device that can connect to the Internet without connecting a network cable.
The Ihe a ga-atụle na-azụ Ikuku Cards >>>
Na ojiji nke wireless kaadị, anyị kwesịrị iburu ihe mgbe anyị na ịzụrụ ya. Anyị pụrụ ịtụle si na-esonụ.
1. The ụdị kọmputa
2. The wireless kaadị ọnọdụ
3. Ike mgbaama
Dị ka dị iche iche interface ụdị, we can divide wireless cards into the following seven types.
1. USB wireless kaadị
Ugbu a USB wireless kaadị bụ ihe kasị nkịtị otu. Nke a na ụdị wireless kaadị nwere ike jiri desktọọpụ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọrụ dị ka ogologo dị ka ọkwọ ụgbọala na-arụnyere. The USB interface wireless kaadị ga-eji na ma akwụkwọ kọmputa na desktọọpụ kọmputa. Ọ bụ adaba na-ebu na-agbanwe iji. Ma, ya mgbaàmà bụ ndị kasị njọ.
2. PCI interface wireless kaadị
PCI interface wireless card is a special network card for desktop computers. The PCI interface wireless card has an external antenna, na mgbaàmà dị ike karịa ndị ọzọ wireless kaadị. Na okpomọkụ ya dissipation dị mma, n'ihi ya, ọ nwere mma kwụsie ike.
3. Obere-PCI wireless kaadị
Obere-PCI bụ a wuru na-wireless netwọk kaadị. Ya uru na-dịghị mkpa na-ogide PC kaadị ma ọ bụ USB oghere.
7. PCMCIA interface wireless kaadị
PCMCIA interface wireless kaadị bụ a netwọk pụrụ iche kaadị maka akwụkwọ kọmputa. PCMCIA ụgbọ ala na-ekewa n'ime abụọ na ụdị, na otu onye bụ 16-bit PCMCIA na ndị ọzọ bụ 32-bit CardBus. It has the characteristics of easy installation and light volume. Its stability is second only to PCI interface wireless card.
New Standard Limiting Speed Intel 7260 wireless kaadị
USB Ikuku Kaadị
iwu nkọwa Technology Nokia Technology_Internet software HTC OS-ụlọ ahịa Samsung Intel Public Nzube ihe Njikwa Ngwaọrụ ngwaọrụ Model 64-bit Windows Ekwentị mkpanaka processor Series Driver Support HD Graphics CPU processors ọkwọ ụgbọala nkwado
HTC CPU Qualcomm ọkwọ ụgbọala nkwado ngwaọrụ Model Public Nzube 64-bit Windows Sony Ericsson iwu nkọwa ihe Njikwa Ngwaọrụ Intel Series Driver Support OS-ụlọ ahịa Nokia processors Ekwentị mkpanaka HD Graphics smartphones software Samsung Samsung Galaxy Technology Technology_Internet Intel Server processor